FIATREHANA CAN 2019 : Hiatrika fanomanan-tena farany any Maroc ny Barea
Nandray an’andriamatoa Ahmad filohan’ny Kaofederasiona Afrikanin’ny Baolina Kitra (CAF), tao amin’ny toeram-piasany ny Minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena, Tinoka Roberto tamin’ny alatsinainy 10 Jona lasa teo. 11 juin 2019
Fehin-kevitra maromaro no niarahan’ny roa tonta nanapaka tamin’izany ka isan’ireo nisongadina ny fanarahana mivantana ny lalao fiadiana ny tompondakan’i Afrika na ny Can sy ny fanamoràna ny fanampiana izay tokony ho azon’ny ekipam-pirenena Barea. Ny tolakandro taorian’io moa dia niaraka nifanatri-tava tamin’ ireo mpitia baolina kitra tetsy amin’ny Kianjaben’i Mahamasina ny Barea sy ny Minisitra.
Nitohy tetsy amin’ny hotely Carlton Anosy ny lahadinika taorian’io ary isan’ny tazana tamin’izany hatrany ny filohan’ny Caf, ny filohan’ny Kaomitin’ny fampanaraham-penitra mitantana vonjimaika ny Federasiona Malagasin’ny Baolina kitra (FMF), ny avy amin’ny Minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ireo mpanohana ny Barea. Amin’ny ankapobeny dia efa saika tomombana avokoa ny pitsopitsony rehetra hiatrehana ny Can any Ejipta raha ny tapaka nandritra ireo lahadinika nifanesy ireo.
Efa nivoaka ny lisitra...
Rehefa avy nahazo tsodrano tamin’ny vahoaka malagasy teto an-tanindrazana kosa ny ekipam-pirenena Barea dia nanainga omaly hariva nihazo an’i Maroc indray hanao ny fanomanan-tena farany mialoha ny tena hiatrehana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika atao atsy Ejipta. Efa feno tanteraka ny mpilalao ary vonona amin’ny fanomanana rehetra ny ekipa na ny ara-tsaina izany na ny ara-batana.
Efa navoakan’ny mpanazatra Nicolas Dupuis ny lisitr’ireo hiatrika ity fanomanan-tena ity. Tsy mbola fantatra mazava kosa hatreto na ireto lisitra hiatrika ny fanazaran-tena any Maroc ireto no hiatrika ny Can na mbola hisy lisitra fanampiny. Miisa 24 izy ireo ary ireto avy izany :
1. Ibrahima Dabo (Saint-Pierroise)
2. Carolus Andriamahitsinoro (Al Adalh)
3. Romario Rakotoarisoa (Fosa Juniors FC)
4. Mamy Gervais Randrianarisoa (Saint-Pierroise)
5. Razakanantenaina Pascal (Saint-Pierroise)
6. Marco Ilaimaharitra (RC Charleroi)
7. Caloin Dimitry (Les Herbiers)
8. Aro Hasina Andrianarimanana (Kaizer Chiefs)
9. Faneva Andriatsima Ima (Clermont Foot)
10. Njiva Rakotoarimalala (Samut Sakon)
11. Paulin Voavy (Mish El Makassa)
12. Lalaina Nomenjanahary (Paris FC)
13. Anicet Andrianantenaina (Ludogorets)
14. Jeremy Morel (Olympique Lyonnais)
15. Ibrahim Amada (Mouloudia Club d’Alger)
16. Jean Dieu Donné Randrianasolo (Cnaps Sport)
17. Toavina Rambeloson (Arras)
18. Rayan Raveloson (FC Troyes)
19. William Gros (Vitre)
20. Romain Métanire (Minnesota United FC)
21. Thomas Fontaine (Stade de Reims)
22. Jérome Mombris (Grenoble Foot 38)
23. Melvin Adrien (Martigues FC)
24. Fabien Boyer (Grenoble Foot 38)